Indlela Lungisa Inflatable Water Slide: Izinkinga Four Common Iningi - China Shanghai Mutong
Indlela Lungisa Inflatable Water Slide: Kunayo Four Izinkinga Ezivamile
Izingane ukugibela isakhiwo
amaslayidi amanzi Inflatable zithandwa kakhulu futhi uma lucky ngokwanele ukuba ngumnikazi umuntu omaziyo ukuthi kungani. Uze endaweni efanele uma ufuna ulwazi sendlela ulungise slide amanzi inflatable. Banzai Falls okwenzeka ukuba ibe ngomunye umkhiqizo kunazo baqaphela iyatholakala futhi omunye ethengisa kakhulu. Ngeshwa nabo Ubonakala omunye amaslayidi eziyinkinga kakhulu kakhulu.
Kukhona ezinye ukulungiswa ukuthi kukhona lula ukulungisa ezinye ezingaphezu lonke ithemba. Ngizomenzela ukumboza izinkinga ezine ezivamile nendlela ungakwazi babanakekele ngokwakho bese ugcine lokho cishe ungomunye izingane zakho amathoyizi ozithandayo.
1. Isikhunta: Awu ihlobo lapha futhi ukuthi ngosuku lokuqala ashisayo izingane zakho bencenga becela slide amanzi futhi ukhiphe ke kusukela kusitoreji futhi uthole konke, sikhuntile. Isikhunta kuyinto ebukekayo futhi kungaba kungenzeka empilweni kodwa ngezinye izikhathi uma akusiyo indawo ebanzi kakhulu ungakwazi ayibulale. Qala ngokuthola leaner ukuthi kuphephile polyester ngendwangu Ngingaluleka Aurora Isikebhe Hlanza Plus. Ungase uthande ukucabangela ukugeza inflatable yakho kanye ngonyaka ukuze usize ukugcina ihlanzekile.
2. Izinyembezi noma lubhoboze ku Indwangu: Kungakhathaliseki ukuthi uqaphele wena nge yakho inflatable amanzi slideizinyembezi noma umshini wokubhoboza engenzeka. Ungase uqaphele uze kufuthwe slide nesaziso okungukuthi ingaphansi eqolo noma cha eziyihaba nhlobo. Uma lokhu kwenzeka kufanele uqale ukuzingela idabukile lendwangu.
Uma-slide sakho ngeke kufuthwe nhlobo umonakalo impilo kungase kuthathe isikhathi esanele ukuthi uyithole ngokushesha. Uma slide sakho kancane kuphela ngaphansi ulele cishe kumane nje kusho ukuthi izinyembezi incane futhi kungase kube nzima ukuthola. Iqhinga ukwenza lokhu kulula ukuba kufuthwe slide squirt ngayo ibhodlela spray ligcwele inhlanganisela isidlo nensipho. Uma une ukuvuza emoyeni ekuphunyukeni kuzo kufanele ubangele ingxube bubble futhi ungakwazi ukubona umthombo inkinga yakho. Uma ukuthola ukuvuza kungenzeka ufuna ukuhlola lonke slide ukuze uqinisekise akukho engaphezu kweyodwa.
Ukuze balungise sidabukile noma idabukile indwangu uqala nge abathungela up emgodini lokhu ukuvimbela zikuthola ukuthola ezinkulu. Uma ithungwe it up uzodinga abanye ingcina kanye ucezu zethu ezingokwenyama isichibi. Ungakwazi ukuthenga ikhithi ngendwangu ukulungisa kusuka cishe noma kuphi ukuthi uthengisa imishini amatende kufanele ukuba nabo ekulungiseni ematendeni.
Landela izinkomba eziza ikhithi nje uqiniseke ukuthi usebenzisa isichibi enkulu ngokwanele ukumboza wonke sidabukile. Uma izinto patch akuzona enkulu ngokwanele ungasebenzisa engaphezu kweyodwa ucezu nje ukuqiniseka ukuthi abaphila ezivuzayo ngo-1-intshi.
3. ezivuzayo Ukuhlukanisa: Ngeshwa uma slide sakho siyeza ngaphandle ezinkulu une uhlobo enzima ukulungisa ukwenza. Esikhathini esiningi lolu hlobo umonakalo impilo kungase kuthathe isikhathi esiningi ukulungisa kodwa kusukela lezi amaslayidi ibiza cishe ufuna lona shot. Uya landela izinyathelo ezifanayo njengoba silungisa umgodi.
Qala ngokukhetha abathungela omhlophe webhola up, qiniseka ukuya kancane beqela uqhekeko sithule. Ngemva kwalokho kwenziwa uya ukumboza indaba patch. Khona-ke ukuwela iminwe yakho futhi vula Blower uma slide kunesithembiso emoyeni ke zinike pat ngemuva.
4. A Blower onesici noma Broken: Uma Blower iyunithi kubi ngaphandle uma une nakho kagesi motor ukulungiswa kufanele ngempela esikhundleni salo. Ungakwazi ukuthenga esikhundleni izimpimpi ku eBay ngoba esisukela $ 50 - $ 200 kuye ngohlobo kanye isimo. Uzodinga ukufanisa usayizi Blower namandla umuntu une ukuze usebenze ngendlela efanele.
Banzai Falls akuyona kuphela Umenzi inflatable amaslayidi amanzi kunezinye brand like Blast Zone futhi Bounceland, ngombono wami unikela ngemikhiqizo ephakeme izinga. Kubonakala banzai ukuba asemrarweni nge ukuqina okuholela abantu abaningi kangaka ngifuna izinkomba zendlela kubo. Ngithemba wena uyakwazi ukulungisa slide sakho kodwa uma kungenjalo uhlole ezinye nezinye brand.
Indlela Lungisa Inflatable Water Slide: Izinkinga Iningi Four Common Isiqophi Ezihlobene:
Playground Fun Kids Play at the Park Water Ball Bouncy House Swing Slide & Zip line , by the TheChildhoodLife Kids and Toys.